Madaxweynayaasha galmudug iyo puntland oo heshiis ku kala saxiixday cadaado
You are at:Home»WARARKA»Madaxweynayaasha galmudug iyo puntland oo heshiis ku kala saxiixday cadaado
Magaalada cadaado waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo puntland axmad ducaalle geelle xaaf iyo cabdi wali maxamad cali gaas.
Kulanka labada madaxweyne waxaa qeyb ka ahaay madaxweynaha jubbaland axmad maxamad islaam axmad madoobe iyo mas’uuliyiin kale.
Labada madaxweyne goboleed ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis ka kooban dhowr qodob oo ku saabsan xiriirka labada maamul iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer galkacyo iyo deegaanada kale ee labada maamul ka taliyaan.
Madaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug ayaa Qodobada ay ku Heshiiyeen waxaa kamida in ay sameyn doonaan Guddi Labada Maamul ah oo ka qeyb qaata Xal u helidda in laga baxo Colaadda ku soo laab laabatay Gobolka Mudug iyo in ay sameynayaan Ciidan isku dhaf ah oo la geyn doono Goobaha lagu dagaalamay ee Gobolka Mudug..
Intaas kadib labada madaxweyne oo uu wehliyeo axmad madoobe ayaa socod dheer kusoo maray qeybo kamid ah magaalada cadaado iyagoona si wadajir ah ula hadlay warbaahinta.
Gaas iyo axmad madoobe waxa ay kamid ahaayeen madax shalay ka qeyb gashay xafladda caleema saarka madaxweyne xaaf waxaana socdaalka gaas ee cadaado ay noqoneysa tii ugu horeysay ee uu magaalada ku tago.